Dood weyn oo ka dhalatay $30 milyan oo uu Turkiga ugu deeqay Soomaaliya - Allbanaadir
Home Xogta Dahsoon Dood weyn oo ka dhalatay $30 milyan oo uu Turkiga ugu deeqay...
Dowladda Turkiga ayaa Khamiistii lasoo dhaafay ku dhawaaqday inay Soomaaliya ugu deeqday 30 milyan oo dollar, taasi oo ay kala kulantay dhaleeceyn xoog leh kadib markii ay arrintaan kusoo aaday marki ay dhawaan Dowladda Turkiga sheegtay inaysan heysan wax diyaarad dab-damis ah xilli dhowr magaalo oo ku yaal dalkaas uu ka kacay dab xoog leh.
Lacagta ay Ankara ugu deeqday Soomaaliya, oo bil walba la bixin doono 2.5 milyan oo dollar illaa muddo sanad ah, ayaa loo adeegsan doonaa “kabidda miisaaniyadda iyo dhisidda xarumaha Dowladda,” waxayna qeyb ka tahay heshiis ay labada dal kala saxiixdeen bishii hore.
Tan iyo markii uu Turkiga sanadki 2005 u aqoonsaday “Sannadka Afrika,” Turkigu wuxuu si xooggan ula shaqeeyay Soomaaliya, wuxuuna kor u qaaday xiriirka labada dhinac ee siyaasadda, Militariga, Ganacsiga iyo Dhaqaalaha.
Taageerada Turkiga uu siiyey Soomaaliya ayaa waxay dhiirigelisay fikirka iyo rabitaanka Ankara ee ah inay kor u qaaddo saamaynta juqraafi ahaan, laakiin qaar ka mid ah indha -indheeyayaasha ayaa su’aal geliyey illaa inta ay socon karto saameyntiisa Gobolka marka la eego duruufaha dhaqaale ee Turkiga.
Dowladda Turkiga ayaa lixdii sano ee lasoo dhaafay waxay Soomaaliya ugu deeqday lacag gaareyso 117 Milyan oo Dollar, waxaana xusid mudan in Turkiga uu sanadkii lasoo dhaafay iyadoo ay jirto dhaqaale xumo ka dhalatay cudurka COVID19 inuu gacan ka geystay deyn-cafinta Soomaaliya isagoo ballan qaaday ku dhawaad $ 2.4 Milyan, wuxuuna kamid noqday 116 dal oo gacan ka geystay deyn cafinta.
Sanadkii lasoo dhaafay, dowladda Turkiga ayaa Soomaaliya usoo dhoofisay ganacsi qiimo ahaan gaaraya $272.76 milyan halka shirkadaha laga leeyahay Turkiga ay Soomaaliya ku maal gashadeen $100 milyan.
Saldhigga milatari ee ugu weyn ee Turkigu ku leeyahay dibadda ayaa ku yaalo Soomaaliya, waxaana halkaas lagu tababaraa askar Soomaaliyeed. Si kastaba ha ahaatee deeqdii ugu dambeysay ayaa qaar ka mid ah dadka Turkiga waxay ku tilmaameyn inay tahay mid xad dhaaf, maadaama ay kusoo aaday xilli Dowladda Turkiga ay awoodi la’dahay inay soo iibsato diyaarado lagu caawiyo dadaallada dab -damiska.
“Wadar ahaan lix diyaaradood oo dab-damis ah ayaa lagu iibsan lahaa lacagtan,” ayuu yiri Alpay Antmen oo ka tirsan xisbiga ugu weyn mucaaradka ee Republican People’s Party.
Qaar kale oo ka tirsan dadka Turkiga ayaa soo dhoweeyay deeqdan oo ay ku tilmaameyn inay tahay mid wax badan u tari karta dal muddo tobanaan sano ah la il darnaa macluul, abaaro iyo dagaallo sokeeye.
Cabdirashiid Xaashi oo horey usoo noqday wasiir iyo agaasimihii hore ee Machadka Heritage ee Daraasaadka Siyaasadda, oo ah hay’ad cilmi baaris ku leh Soomaaliya, ayaa sheegay in inta badan kheyraadka qaranka ee dalka la geliyo meelaha mudnaanta leh, sidaas darteedna maalgelinta istaraatiijiyadeed ay dhaqaale uga baahan tahay dibadda.
“Taageerada miisaaniyadda ee $ 30-ka milyan ah ee Turkigu ku bixinayo dadaalka dowlad-dhisidda Soomaaliya waa mid ka mid ah maalgelinta, waxayna micno weyn u leedahay Soomaaliya, oo u aragta Ankara inay tahay mid ka mid ah xulafadeeda ugu dhow,” ayuu u sheegay Arab News.
“Turkigu wuxuu u arkaa inuu dib ugu soo laabanayo maalgashigiisii Soomaaliya oo ahaa qaab mug weyn oo ganacsi oo u dhexeeya labada dal,” ayuu Xaashi ku daray.
Sanadkii la soo dhaafay, shirkad Turki ah ayaa saxiixday qandaraas 14 sano ah oo lagu maamulayo laguna hagaajinayo dekedda caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Soomaaliya waxay sidoo kale kaalmo ka heshaa Ankara, gaar ahaan mashaariicda horumarinta iyo arrimaha bulshada, iyadoo loo marinayo Wakaaladda Iskaashiga iyo Xiriirinta Turkiga.
Turkiga ayaa isbitaal ka dhistay dalka, wuxuuna dib u dhisay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee caasimadda.
Soner Cagaptay, oo ah aqoonyahan Turki ah oo ka tirsan Machadka Washington ee Siyaasadda Bariga -dhow, ayaa sheegay in ballaarinta Turkiga ee Afrika ay tahay arrin mudan in lagu ammaano Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan.
“Turkigu runtii wuxuu iska indho tiray Afrikada ka hooseysa Saxaraha inta badan ilaa uu ka imaaday Erdogan,” ayuu u sheegay Arab News.